Tantaran'ny tantaran'ny mainty hoditra (ampahany 1) - AFRIKHEPRI
Tantaran'ny tantaran'ny olona mainty (ampahany 1)
Ity zavamaniry afrikanina ity dia afaka mitsabo ny Alzheimer, Parkinson na ny fivontosana
Alakamisy 9 Jolay 2020
- 1.530.000 taona
Ireo fanontam-pirinty voalohan'ny razambenay voalohany
"Io no tranainy indrindra dian-tongotra undisputed porofo ny hominid Homo erectus (angamba) mandeha amin'ny fomba mahomby ho ataontsika. Pejy misy rohy mankany amin'ny misy Koobi Fora , any amin'ny morontsiraka atsinanan'ny Farihin'i Turkana, ao amin'ny Gabbra mpifindrafindra Kenya.
- 1.500.000 taona
Ny olombelona voalohany dia manao fitaovana taolana
Ny fanandramana sy ny fandalinana mikrôpôpika dia mampiseho fa ny endrik'ireo fitaovana taolana hita hita ao Swartkrans , Republic ofAfrique du Sud, dia nampiasain'ny olona tany am-boalohany mba hanangona antontan-tendrombohitra.
- 400.000 taona
Ny fampiasana voalohany ny pigment
Pigments voajanahary toy ny ochres et iron oxides dia nampiasaina ho toy ny tonon-koditra efa hatramin'izay. Mpikaroka mahita porofo fa ny olona tany am-boalohany nampiasa ny loko ho an'ny hatsarana tanjona toy ny fandravahana vatana. Hita tao amin'ny Cave Twin Rivers, akaikin'i Lusaka, ao Zambia .
Atrikasa hosodoko voalohany
À Blombos Cave atsinanan'i Cape Town, Afrique du Sud, ny ekipan'ny mpikaroka dia nahita ny fivarotana loko voalohany tamin'ny 2008. Ny tranonkala dia nahitana ireo fitaovana sy fitaovana izay nahatonga ny olombelona maoderina tamin'ny voalohany dia nampifangaroin'ny sary hosodoko voalohany.
- 75.000 taona
Ny fandriana malaza indrindra fantatra amin'ny fandriana sy ny fampiasana fanafody fanafody
En Afrique du Sud, à Sibudu, ny olona dia nanamboatra fatin'olom-boankazo ho an'ny masiaka sy ny monocot hafa namboarina tamin'ny ravina manitra izay misy ny bibikely famonoana bibikely sy ny fanafody famonoana olona.
Andramo voalohany handrindrana ny vaovao
Misy vato marobe avy any okera hita ao Blombos Cave en Afrique du Sud, akaikin'i Cape Town ao 2002. Ity takelaka arke ity dia marika izay mety nampiasaina hanisa na hitahiry ny fampahalalana.
Ao amin'ny zohy Sibudu: ny fananganana tena fantatra voalohany sy ny fampiasana adhesives composite
Ao amin'ny Sibudu Cave , any amin'ny vatolampy iray any avaratra avy any KwaZulu-Natal , Afrique du Sud, ato amin'ity tranokala ity, dia nahita porofo voalohany momba ny ohatra voalohany amin'ny teknolojia olombelona maoderina miaraka amin'ny fampiasana adhesive composite.
Ny karazana tranainy indrindra fantatra amin'ny matematika
The taolana Lebombo , ny zavamananaina matematika malaza indrindra, dia tondroina miaraka amin'ny tsipika 29 misintona izay niniana nalaina tamin'ny fibre babon. Hita tao anaty lava-bato any amin'ny tendrombohitra Lebombo any Swaziland izany.
- 33.000 taona
Ny hazomasin'i Ishango, ny alimanaka tranainy indrindra
Ny matematika dia nanomboka tamin'ny fandraketana voalohany ny fanandramana hamaritana ny fotoana. ny hazok'i Ishango, hita tao Ishango au Congo (Zaire) tamin'ny taona 1960 dia mampiseho ny alimanaka vita amin'ny volana iray. Izy io dia iray amin'ireo zavatra tranainy indrindra fantatra amin'ny sary sokitra lozika na matematika.
Ny fototry ny kemitism
Boky an'ny maherin'ny hazavana - Paulo Coelho (Audio)